About Us - DongGuan Aamoon Co. Hardware, Ltd
Rosin King waa boqortooyo ah naqshadeeye jaraa'id rosin iyo soo saare. Waa warshad, waa shirkad, waa qalab ka fiirsato marijuana iyo mashiinka-qeybiyaha trustable.
teknoolajiyada Rosin King oo la asaasay 2015, waxaa la qorsheeyo oo soo saari saxaafadda rosin Haydarooliga, pneumatic iyo korontada, xirmooyinka enail King Rosin ayaa sidoo kale tilmaamay, bacaha rosin, kululeeyayaasha PID maamusha iyo kaydadka.
At Rosin King Products, aan adag u shaqeeyaan si ay u keenaan qalab fiirsato solventless ugu wanaagsan ee macaamiisheena. Waxaan ku siin waxbarashada dadka adduunka oo dhan iyada oo loo marayo dhacdooyinka our waayo-aragnimo solventless, iyada oo loo marayo kooxda khubarada solventless our, iyo website-kayaga rosin -kings .com.
Hadafkeenu waa in faafin fiirsato solventless dunida oo dhan by keeno si ay suuq fiican ee wax soo saarka fasalka haddii aad u baahan jaraa'id rosin guriga ama aad raadinayso ugu waxyaabaha our fasalka ganacsiga, waxaan leenahay qalabka iyo khibradda inaad ku gaarto hadafyadaada.